MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA KUURIYA KUURIYA MASTIFF DOG MASTIFF - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Kuuriya Kuuriya Mastiff Dog Mastiff
Qaangaarka Kuuriya Dosa Mastiff, waxaa iska leh 'The Mighty Dosa'
Jaakada Kuuriyaanka ah ee Dosa Mastiff ayaa ah mid gaaban, jilicsan oo dhalaalaya. Midabada waxaa ka mid ah shukulaatada, mahogany iyo casaan. Baro cad oo xabadka ah ayaa la oggol yahay.
Kuuriya Doti Mastiff waa mid sharaf leh, si fudud ku socota dabeecad wanaagsan, caqli badan oo daacad ah. Dosa waxay jeceshahay inay dadka la joogto. Hubso inaad tahay eeygan hogaamiyaha xirmada , oo siiya maalinle badan jimicsi maskaxeed iyo mid jireed si looga fogaado kala-go'id walaac . Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah in la gaaro xaalada hogaamiyaha . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta. Rafaahan jilicsan waa macaan-dabiici ah, sharaf leh, haybad iyo saaxiibtinimo leh. Waxay u janjeertaa inay 'ku tiirsato' dadka ay ugu jecel tahay. Waxay samaysaa eey dhab weyn. Aad ugu fiican xayawaannada kale iyo carruurta. Lagu keydsaday shisheeyayaal Kormeer ayaa looga baahan yahay agagaarka carruurta yar yar maadaama ay si kama 'ah ugu tuman karto ama u tuuri karto. Ku habboon bini'aadamka ilaa isgaarsiinta canine waa lagama maarmaan.
Dhererka: Ragga 25.5 - 30 inji (64 - 76 cm) Dumarka 23.5 - 27 inji (59 - 68 cm)
Miisaanka: Ragga 160 - 185 rodol (72 - 84 kg) Dumarka 145 - 165 rodol (65 - 74 kg)
5 bilood jir Jarmal adhijir ah
Isha Cherry waa wax caan ku ah cawdu waa in laga saaraa, oo aan hoos loo dhigin. Cunto wanaagsan ayaa muhiim u ah cunsurigan aadka u kordhaya, ee ballaaran. Waa u nugul ubax marka waa in la quudiyaa 2 ilaa 3 cunto yaryar maalintii. Waxa kale oo laga yaabaa inay ku dhacdo qanjirada 'dysplasia' iyo cudurada indhaha ee hidde sida Entropia.
Waxay laqabsataa jawiga magaalada iyo dalka labadaba.
Heer tamar dhexdhexaad ah. U janjeedha caajis. Eydu waa inaan waligood la siinin jimicsi culus maadaama lafahoodu wali sameysmayaan. Taa bedelkeeda, eey yar waa in la siiyaa meel fara badan oo uu si xor ah kaligiis u jimicsado. Sida eeyaha oo dhan, Dosa waxay ubaahantahay inay socoto socod maalinle ah ama orod, si loo buuxiyo dareenka asaasiga ah ee canine inuu socdo. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha.
Qiyaastii 7-12 sano
Iftiin dhexdhexaad dhexdhexaad ah Caday toddobaadle, wuxuu u baahan yahay nadiifin toddobaadle ah oo ka mid ah laalaabka maqaarka, iyo bil kasta oo lagu maydho shaambo ka hortagga bakteeriyada.
Epoh-Nee Kuuriya Dosa Mastiff eey ah oo jirta 6 bilood, sawir qadarin leh Redline Bordeaux
Epoh-Nee Kuuriya Dosa Mastiff eey ah oo 6 bilood jir ah oo sawir leh waxaana iska leh Redline Bordeaux
cad bulldog pitbull isku dhafan
shiba inu iyo chow mix
feeryahan isku qasan boston terrier
muxuu yahay puweenie puppy
injirta eyda lagu calaliyo maxay u egtahay
sern bernard oo lagu qasay dane weyn
qas shaybaarka leh bulldog american